Aliexpress - इलेक्ट्रोनिक्स को अनलाइन स्टोर, फेसनल नवीनता, खेलौना, घरेलू सामान
AliExpress - किफायती उत्पादनहरूका एक अनलाइन स्टोर जुन सबैलाई थाहा छ
Aliexpress मा जानुहोस्
फोन र सहायक उपकरणहरू
कम्प्युटर र कार्यालय
खेलौना, बच्चाहरू र बच्चा
गहना र घडिहरु
झोला र जुत्ता
घर र बगैचा, फर्नीचर
अटोमोबाईल र मोटरसाइकल
स्वास्थ्य र सौन्दर्य, कपाल
त्यहाँ कुनै ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता छैन जसले कहिले मार्केटप्लेस AliExpress नामको भ्रमण गरेन। चिनियाँ निर्माणका विभिन्न वस्तु इकाईहरूको बिक्रीको लागि यो ग्लोबल भर्चुअल प्लेटफर्म हो। एक अनलाइन स्टोर को फाइदाहरु को बजेट हो। अनलाइन ट्रेडिंगमा विश्व नेता को विशाल वर्गीकरण उल्लेख गर्न असम्भव छ।
Aliexpress खुद्रा र बल्क मा सामान बेच्छ। इन्टर्नेट प्रोजेक्ट अलिबाबा ग्रुपलाई एक धेरै अवलोकन गरिएको वेब स्रोतहरू मध्ये एक मानिन्छ, र यसको कार्यक्षमतामा पनि फरक हुन्छ (साइट जानकारीलाई विभिन्न भाषाहरूमा स्वचालित अनुवाद, क्रमबद्ध स्थितिका लागि फिल्टरहरूको उपस्थिति, आदि)।
AliExpress , तपाईं साइट मा प्रस्तुत कुनै पनि उत्पादन खरीद गर्न सक्नुहुन्छ
सेवाले स्वचालित रूपमा अनलाइन प्लेटफर्मको प्रत्येक एकाइको बारेमा डाटा अनुवाद गर्दछ ताकि प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्पादनहरूका विशेषताहरू अध्ययन गर्न, उपलब्ध आकारका बारे सोधपुछ गर्न सक्ने इत्यादि हुन्छ।
अली एक्सप्रेस मा जानुहोस्
बनेको अनलाइन स्टोरको वर्गीकरण के हो?
AliExpress क्याटलगमा १ the थिमेटिक सेक्सनहरू छन् - कोटिहरूको सूची दायाँका ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिन्छ
जुन आवश्यक उत्पादनहरू फेला पार्न उपयुक्त छ। सूचीको सुरूमा घरेलू उपकरणहरू, टेलिफोनहरू, पीसीहरू, कार्यालय उपकरणहरू र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू,
किनकी तिनीहरू उपभोक्ताहरू बीच धेरै नै माग गर्दछन्। AliExpress मा खरिद गर्नुहोस् नयाँ मोबाइल मोडेलहरू र अन्य प्राविधिक चमत्कारहरू छैनन्
श्रम गर्न रकम हुनेछ:
मुख्य पृष्ठको शीर्षमा खोजी बार छ;
नयाँ उत्पादनहरूको उप श्रेणीको उपस्थितिमा, अन्तिम मिनेट छुट, आदि;
"$ To सम्म" को मूल्यमा उत्पादनहरुको किफायती चयन छ।
रूबलमा AliExpress अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोगकर्ताहरूको लागि नेभिगेशन
थिमेटिक सेक्सनहरू विस्तृत समूहहरूमा उत्पादनहरू अतिरिक्त क्रमबद्ध गर्न प्रदान गर्दछ। "सबै बच्चाहरूका लागि" कोटीले स्वचालित रूपमा चीनका निर्माताहरूबाट प्रस्ताव साझा गर्दछ, विषयगत उपसमूह (डायपर, जुत्ता, कार सीटहरू, आदि) गठन गरेर।
मनपर्ने वस्तु जहिले पनि कार्ट वा मेरो इच्छामा थप्न सकिन्छ। सम्भावित खरीदहरूको संख्या आइकनको माथिको भागमा प्रदर्शित हुन्छ जसले गर्दा उपभोक्ता खोजी पछि अर्डर गर्न बिर्सदैन। Aliexpress पहिलो भेट बाट बुझीनेछ, किनकि शुरुवातकर्ताले पनि निर्णयकारी जानकारीमूलक संग्रहको लागि गर्न सक्छन्:
तपाईं यो मनपर्दछ;
भुक्तानी र AliExpress विशेष अफरहरू
AliExpress को अर्को शक्ति यसको धेरै भुक्तानी विधिहरू छन्। उपभोक्ताहरूसँग बैंक कार्ड (मास्टरकार्ड, भिसा, मास्ट्रो) वा इलेक्ट्रॉनिक भुक्तान प्रणाली प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्ने अवसर छ। मोबाइल फोन मार्फत भुक्तानी र मनी ट्रान्सफर पनि उपलब्ध छन्। अनलाईन स्टोरका नयाँ पाहुनाहरूका लागि विशेष संख्याहरू छन्। सुझावहरूले तपाईंलाई तपाईंको पहिलो र त्यसपछिका खरीदहरूमा बचत गर्न मद्दत गर्दछ:
शुरुआतीहरूको लागि कुपन;
पोर्टलमा दर्ताका लागि बोनस;
अनुप्रयोग स्थापना गर्न छुट।
खोज प्रमोशनको एक उदाहरण AliExpress परियोजना हो। स्पष्ट इन्टरफेसको साथ आधिकारिक वेबसाइट , सजिलो नेभिगेसन, चिनियाँ उत्पादकहरूको प्रस्तावको एक प्रभावशाली संख्या, कोटिहरूमा सामानको सुविधाजनक क्रमबद्ध - र यो एक अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्मको फाइदाहरूको पूर्ण सूची छैन।
हाम्रो टीम इन्टरनेट स्पेस को नेताहरु बराबर छ। हामी अद्वितीय प्राविधिक क्षमताहरूको साथ सेवा हौं जुन TOP मा साइटको द्रुत पदोन्नतिमा योगदान गर्दछ। परिणामको पूर्ण ग्यारेन्टी - अन्तिम म्याद पूरा फिर्ता पूरा गर्न असफलताको मामलामा! अधिक को लागी प्रयास गर्नुहोस् - खोज इन्जिन अनुकूलन पेशेवरहरु मा विश्वास गर्नुहोस्!